घरमा झैझगडा भई रहन्छ ? यस्तो बास्तो दोस हुन सक्छ । यसरी हटाउन सकिन्छ – Sandesh Press
घरमा झैझगडा भई रहन्छ ? यस्तो बास्तो दोस हुन सक्छ । यसरी हटाउन सकिन्छ
November 1, 2021 403
ज्योतिषमा वास्तुको विशेष महत्व हुने गर्दछ। वास्तुको उपायबाट नीजि जीवन र प्रोफेशनल लाइफमा परिवारका हरेक समया हटाउन सकिन्छ। आज हामी तपाईलाई केही यस्ता टिप्सका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन उपायबाट हरेक किसिमका समस्याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ।
१) वास्तु शास्त्रका ईशान कोणको विशेष महत्व हुने गर्दछ, यस दिशालाई निकै शुभ मानिने गरिन्छ। घरको ईशान भाग उठेको हुन भएन। घरको यस्तो क्षेत्रमा यो दोष हुँदा पिता पुत्रबीच दूरी बढ्ने गर्दछ।
२) घरको उत्तर पूर्व कोणमा स्टोर रुम नबनाउनुहोस्। यसो गर्दा घर परिवारका सदस्यबीच झगडा हुने गर्दछ।
३) वास्तुशास्त्र अनुसार उत्तर पूर्वी दिशामा भान्सा वा शौचालय हुँदा परिवारका सदस्यबीच मनमुटाव बढ्ने गर्दछ। यस समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि घरको उत्तर पूर्वी दिशामा भान्सा र शौचालय नबनाउनु हुँदैन्।
४) ईशान कोणमा बिजुलीका उपकरण राख्दा पिता र पुत्रबीच मनमुटाव हुने गर्दछ। घरको उत्तर पूर्वी दिशामा यस्ता चीज राख्नु हुँदैन्।
५) वास्तुशास्त्रका अनुसार घरको उत्तर पूर्वी दिशामा फोहोर नराख्नुहोस्। यसो गर्दा परिवारका सदस्यबीच मनमुटाव बढ्ने गर्दछकात्तिक । १४ दिनदेखि अज्ञात रहेका अछामका एक पुरुषको शव भेटिएको छ । कमलबजार नगरपालिका-५ कुईका ३४ वर्षीय रेशमराज तिमिल्सैनाको शव साेमबार भेटिएको हो । १४ दिनसम्म नेपाल प्रहरीको सबै संयन्त्र लगाएर खोजी कार्य गरिए पनि तिमिल्सैनाको अवस्था अज्ञात थियो ।
Nextधनतेरसको दिन सुन र चाँदी बाहेक यी ४ चीज किन्नुहोस् , हुनेछैन कहिलै धनको कमी